I-Direct Beach Front Condo! 104
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnglers
UAnglers unezimvo eziyi-166 zezinye iindawo.
UAnglers ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-Anglers Cove ibekwe ngokuthe ngqo kwisanti kwindawo entle yaseRedington Shores eFlorida. Uluntu lwethu lwesiqithi lunamagumbi okulala amathathu abanzi amagumbi amathathu okuhlambela angaphambili anikezela ngeendawo ezintle zolwandle kunye nokutshona kwelanga. I-Anglers Cove ibekwe kufuphi ne-Redington Shores peir yokuloba eyaziwayo kwaye ifumaneka ngokufanelekileyo imizuzu engama-40 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseTampa kunye nemizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseClearwater St.
Ezi condos zikhulu zokulala ezintathu zilala ukuya kuthi ga kwishumi elilungele iholide yosapho eyonwabisayo kunye nabantwana okanye xa uhamba neqela elonwabela imfihlo. Ii-condos zethu zinokuqeshwa kangangeentsuku nje ezintathu okanye wamkelekile ukuba uhlale inyanga okanye ngaphezulu. Igumbi ngalinye lokulala linegumbi lokuhlambela labucala elipheleleyo. I-master bedroom suite inebhedi enkulu, igumbi lesibini lineebhedi ezimbini ezingooKumkanikazi kwaye igumbi lesithathu lineebhedi ezimbini ezigcweleyo. Onke amagumbi okulala anemibono emihle, ii-closets ezinkulu, i-cable TV kunye nokufikelela kwi-intanethi. Indawo yokupaka ikwisiza ukulungiselela wena.
I-condo yethu inekhitshi eligcweleyo kunye nendawo yokuhlala. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ukuze uzive usekhaya. Iilinen kunye neetawuli zibonelelwa ukuba uzisebenzise. Ukwenzela lula, kukho ingqekembe yeewasha ezisetyenziswayo kunye nezomisi kwindawo.
Yonwabela i-Anglers Cove ichibi lokuqubha elishushu labucala, phumla emthunzini wendlu yethu yetiki okanye indawo yokuphumla elangeni kanye elunxwemeni. Zola kwibhafu eshushu, okanye usebenzise indawo yethu ye-BBQ yepikiniki. Zama isandla sakho ekulobeni kwi-pier ende yokuloba okanye uthathe uhambo lokuphumla elunxwemeni.
I-Redington Shores yaziwa ngokuba yindawo engeyiyo yorhwebo eya kukunika loo mvakalelo yeholide "yolwandle". Ngqo ngaphaya kwesitrato yivenkile erentisayo enebhayisekile, izithuthuthu, iikayak kunye nazo zonke izixhobo zakho zohambo. Kwakhona ngaphaya kwesitrato kukho ivenkile eluncedo eyenza kube lula ukulungela usuku elunxwemeni kunye nevenkile enqabileyo yesandwich. Ukukwenzela lula, i-Suncoast Beach Trolly imisa kanye phambi kwesakhiwo, ikwenza kube lula ukukhwela inyuka isehla kwiiGulf Beaches ngaphandle kokukhathazeka ngemoto. I-condominium ikwiimayile nje ezimbalwa ukusuka kwi-Historic John's Pass - ilali yokuloba yenkulungwane eyi-Pinellas County #1 enomtsalane kubakhenkethi, enamakhulukhulu abarhwebi bendawo, iindawo zokutyela, i-jet ski kunye nerenti yezikhitshane kunye nohambo lwedolphin. Kukho iintlobo ngeentlobo zokugcina wonke umntu kwiqela lakho onwabile kwaye enelisekile.
Umbuki zindwendwe ngu- Anglers
Izinga lokuphendula: 84%
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Redington Shores